Nageenya caalaatti mirkaneessuuf qindominaan hojjechuu
Nageenya caalaatti mirkaneessuuf qindominaan hojjechuu Featured
Biyya keenyatti walitti bu'iinswwan yeroowwan adda addaatti sababoota gara garaatiin uumamaniin lubbuun namaa marartuun, qabeenyi itti dafqameefi dhama'ame horatame baduufi gaaga'amuuf saaxilamaa tureera.
Rakkoon akkanaa lammata akka hinuumamneef humnoonni tasgabbii sadarkaa sadarkaadhaan jiran qindoominaan hojjechuu akka qabaniidha tibbana kan himame.
Walitti bu'iinsa naannawawwan daangaa Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaatti uumamee tureen ittigaafatamtoota hojii, humnoonni tasgabbiifi kanneen biroon lubbuun namaa badeefi qabeenya barbadaa'e keessaa harka qaban seeratti dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuunis eerameera.
Obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyi marii tibbana manneen marii nageenyaa biyyaalessaafi naannolee, pirezidaantota naannolee akkasumas qaamolee federaalaafi naannoo dhimmichi ilaallatu wajjin waa'ee nageenyaafi tasgabbii biyyattiirratti mariyataniiru.
Akeekni marichaa haala nageenyaafi tasgabbii biyyattii qorachuudhaan walitit bu'iinsonni lammata akka hinuumamneef haalota dandeessisaniirratti kallattii kaa'uurratti kan xiyyeeffaateedha.
Ittigaafatamaan mana marii nageenya biyyaalessaafi Ministirri Ittisa Biyyaa, Obbo Siraaj Fageessaa gabaasa raawwii hojii mana marichaa kan dhiyeessan yoo ta'u, naannoleenis dhimmoota nageenyaafi tasgabbiirratti karoorasaanii qopheeffatanii qindoominaafi haala gurmaa'een wajjummaan akka hojjetaniif kallattiin kaa'ameera.
Ministirichi ibsa maricha booda kennaniin, waliti bu'iinsonni naannawawwan keellaafi daandiilee guguddoorratti uumaman sochii ummataafi omishaalee alatti ergamanirratti dhiibbaa uumaa waan jiraniif rakkoolee kanneen furuuf waliigalteerra gahamuusaati kan eeran.
Walitti bu'iinsonni walfakkaatoon lammata akka hinuumamne gochuuf humnoonni tasgabbii marti qindoominii haalota nagaqabeessa gochuu qabu jedhan.
Naannawawwan biyyattii danuutti hiriirran seeraan ala heddu adeemsifamaa turuus eeranii, alaabaa shororkeessitootaa qabachuun lubbuu lammiileefi qabeenyarratti miidhaan akka qaqqabu taasifamuusaas ibsaniiru.
Fuulduratti hiriirawwan seermaleeyii dhabamsiisuuf qaamota dogoggoran barsiisuudhaan hubannoo sirrii qabatanii akka deemaniif hojjechuun akka barbaachisu eeranii, mana marichaatti karoorri olaantummaa seeraa kabachiisuu qabamuusaas eeraniiru.
Oggansa mootummaarraa eegalee hanga caasaa dakaatti qaamni tasgabbiis ta'e kanneen biroon qaamota akka lubbuun namaa baduufi qabeenyarra miidhaan akka ga'u taasisan addaan baafamanii seeraan kan gaafataman ta'uus beeksisaniiru.
Sababa walitti bu'iinsichaatiin lammiilee Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaarraa buqqa'an qe'eesaaniitti deebisuuf karoorri qabamee haalli qophii tokko tokkoon naannoo taasisaa jirus qoratamee akka deebi'aniif waliigalteerra gahamuusaati ministirichi kan eeran.
Torban kana/This_Week 43231
Guyyaa mara/All_Days 1468011